Milaza ve ny tranokalanao hoe "mitandrina"? | Martech Zone
Milaza ve ny tranokalanao hoe "mitandrina"?
Alatsinainy, Jolay 26, 2010 Alahady 19 Janoary 2014 Douglas Karr
Rehefa miasa miaraka amina matihanina SEO aho dia manosika ny volan'ny fikarohana avo indrindra na teny mifaninana indrindra. Rehefa miasa amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana aho dia manosika ny mason'ny maso hatrany ary manatratra. Rehefa miara-miasa amin'ireo lehilahy media sosialy aho dia mandrefy ny mpankafy sy mpanaraka azy ireo foana. Rehefa miasa miaraka amin'ny mpamorona aho dia te hamolavola ireo vahaolana kely indrindra izy ireo.
Tsy mihaino azy ireo aho.
Ny marketing dia tsy ny famaritana ny anarana iraisana ambany indrindra mba hampitomboana ny fahafaha-tratra na zaraina. Amin'ny maha mpivarotra azy, indraindray ny fampielezan-kevitra dia mety hamantarana loharano na influencer tokanana mba hanaovana ny fanonona mety. Miorina amin'ny fahefany, ny faharetan'ny fampielezan-kevitra, ary ny mpihaino kendrena tadiavinay. Indraindray dia tsy ny denominator velively izany - kendrena tsy misy fotony sy milamina ary mifantoka amin'ny tanjona manokana.
Mandika ny lalàna aho.
Mandika lalàna be dia be ny tranokalako. Nisy nanamarika fa, na dia manosika ny mpanjifako hamolavola tranokala misy endritsoratra mifanohitra avo aza aho ao ambadiky ny hazavana, ny anay masoivohom-baovao vaovao tranonkala dia natao miaraka amina endrika maizina sy endritsoratra maivana… izay sarotra kokoa ny mamaky azy. Ny namana hafa dia nanipika fa tsy mety amin'ny solosaina finday kely misy vahaolana ihany koa io.
Ny marina dia, tsy te hisarika mpitsidika amin'ny alàlan'ny netbook na solosaina finday taloha aho. Te-hisarika ny sain'ny olona manana fanapahan-kevitra lehibe aho. Tsy te hisarika ireo orinasa tsy hanavao ny Internet Explorer 6. Tsy te hamaky ny tranokalako akory ny olona. Tiako izy ireo hizaha azy io ary manontany tena raha afaka manampy azy ireo aho… ary asaivo mikitika amin'ny endrika web izy ireo.
Raha tsy miombon-kevitra aminao ianao dia tsy vinavinako.
Manana taha ambony aho. Tsara izany. Tsy mila tahan'ny fihenam-bidy ambany aho. Te hisarika mpampiasa motera fikarohana be dia be aho, saingy tiako ireo olona ireo hanana fahatsapana eo noho eo ary hiala na hifandray. Tsy miresaka amin'ny antsipirihany momba izay ataontsika ho an'ny orinasa aho… satria izahay dia liana amin'ny orinasa lehibe rehetra saika. Ny tanjon'ny tranokalako dia ny tsy hanomezana alalana ny ankamaroan'ny fitarihana ary handrisika ny ambiny hitazona antsika.
Hafa mihitsy ity bilaogy ity. Handalo famolavolana endrika indray izahay amin'ity volana ity hanatsarana ny fanatrarana sy fizarana ilay tranokala, ary hanintona mpitsidika bebe kokoa. Ny tanjontsika sy ny vola azo amin'izany dia mahasoa rehefa mahatratra mpitsidika bebe kokoa izahay. Izahay dia mbola hampiditra endrika famolavolana havaozina ho an'ny mpampiasa be pitsiny kokoa, saingy tsy te-hametra ny mpihaino anay izahay.
Moa ve ny tranonkalanao miteny hoe "Aza mivoaka"? Tsy maninona!
Ny marketing amin'ny Internet dia tsy hoe manatratra olona betsaka araka izay tratranao matetika, fa indraindray manosika ny fanakiviana ny mpanatrika diso. Izany no antony nahatonga ahy ho mpanohitra ny fampiasana rafitra toa ny Digg ho an'ny tranokala orinasa. Imbetsaka izy ireo no mandevina ilay tranokala ary miteraka olana ara-teknika nefa tsy manampy mpitsidika tokana.
Misy zavatra manokana azonao atao mba hisarihana sy hampihenana ireo mpijery amin'ny tranokalanao na bilaoginao. Aza matahotra mandika lalàna.
Matahiry, natahotra ary mpandraharaha tsy nahomby
Ny tsiambaratelontsika amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana
Jul 27, 2010 amin'ny 11: 46 AM
Io no tiako amin'ny tontolon'ny Internet sy ny marketing, ny lalàna tokana dia tsy misy fitsipika! Raha mbola napetraka ny tanjona dia manaraka ny fandrosoana ary ny vokatra dia tsara, inona koa no zava-dehibe?
Doug, ny hajako momba anao dia ny tsy fahatahoranao ny fijoroana sy ny fanoloranao ny hevitrao. Mahatonga ny olona hisaintsaina bebe kokoa izany, ary izany no fitifirana tsara indrindra ho an'ny fahaiza-mamorona mahomby izay angatahina.
27 Jul 2010 amin'ny 3:27 PM
Misaotra Harrison - marina ny anao. Ny tanjona no zava-dehibe.